Khilaafka Giriiga iyo Turkiga iyo Giriiga oo hub ka iibsanaya Faransiiska - Tilmaan Media
Khilaafka Giriiga iyo Turkiga iyo Giriiga oo hub ka iibsanaya Faransiiska
PARIS, FRANCE - JUNE 22: A Dassault Rafale fighter performs during the 53rd International Paris Air Show at Le Bourget Airport near Paris, France on June 22, 2019. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Agency )
Dowladda Giriiga ayaa sheegtay inay xoojinayo ciidankeeda iyadoo hub isugu jira diyaarado iyo doomo dagaal ka iibsanaysa dalka Faransiiska oo ay gaashaan ku yihiin khilaafka Giriiga kala dhaxeeya Turkiga.
Raysalwasaaraha Giriiga Mitsotakis ayaa sheegay in dalkiisu Faransiiska ka’iibsanayo 18 diyaaradood oo loo yaqaan Raafaal, 4 doomaha dagaalka ah, iyo 4 diyaaradah qumaatiga ukaca ah. Sidoo kale wuxuu sheegay in heegan lagalin doono 15 kun oo ciidanka dalkaas ah.
Maraykanka ayaa muujiyay walwalka ay ka qabaan khilaafka kadhex taagan dalalka katirsan gaashaanbuurta Neeto. Waxayna kubaaqeen in wadahadal lagu xalliyo arrimaha jira.
Khayre oo kusoo oo kudhawaaqay inuu yahay musharrax madaxwayne
Shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta furmaya